Haddii aad isticmaasho barnaamijka Apple Mail oo aad rabto inaad ilaaliso, isticmaal duckDuckGo cusub | Waxaan ka socdaa mac
Waxaan iskudayaa inaan iraahdo dhamaanteen waan ognahay duck-yada ugu caansan internetka. Maaha Donald, ee waa adeegga uu na siiyo DuckDuckGo. Haddii aad rabto asturnaan oo aan laguula socon markii aad daalacanaysid, adeegani wuxuu qabanayaa shaqo wanaagsan oo wax ku ool ah. Kama qoomameyno sida uu wax u sameeyo. Hadda waxay sidoo kale soo saartay hawlo cusub oo adeegsiga adeegsiga waraaqaha noo gaarka ah ee Apple uu na ilaalin doono. Ama Mac ama qalab kale. Hawl qabad Beta ah oo aad haddaba isku dayi karto.
DuckDuckGo ayaa ku dhawaaqay in barnaamijku soo bandhigi doono muuqaalkiisa cusub ilaalinta emaylka ee nooca beta. Shaqadani waxay ilaalin doontaa asturnaanta iimaylka iyada oo aan la beddelin adeegyada ama adeeg-bixiyaha barnaamijka ee boostada aad isticmaaleysid. Taasi waa, haddii aad ka isticmaasho adeeg bixiyaha Apple-ka Mac-gaaga ama meel kasta, DckDuckGo ayaa kaa caawin doonta inaad ka ilaaliso farriimahaaga raadinta.
Laakiin waa intaas marka lagu daro, DuckDuckGo sidoo kale waxay siisaa cinwaan emayl shaqsiyeed @ duck.com adeegsadayaasheeda, kaas oo sidoo kale awood u yeelan doona inuu ku soo saaro cinwaanno emayl gaar ah barnaamijka. Mid ka mid ah waxyaabaha ugu fiican ayaa ah in shaqada ilaalinta emaylka ay tahay in Apple ay ku dareyso iCloud +. Isticmaalayaasha lacagta la siiyay mid ka mid ah saddexda nooc ee shirkaddu ku leedahay iCloud, waxay awoodi doonaan inay isticmaalaan Private Really. Qarsoodi xogtaada sida ay uga muuqato shabakada. Waxay sidoo kale yeelan doonaan Hide My Email muuqaal kuu oggolaanaya inaad u dirto emayllo gaar ah oo aan kala sooc lahayn koontadaada ugu weyn, sidoo kale waxay leeyihiin kamaradaha fiidiyowga ee HomeKit oo ammaan ah
Waxaan ku faraxsanahay inaan ku dhawaaqno sii deynta beta ee Ilaalinta Email DuckDuckGo. Adeeggeena gudbinta e-maylka bilaashka ah wuxuu meesha ka saarayaa raadraacayaasha emailka wuxuuna ilaaliyaa asturnaanta cinwaanka emaylkaaga gaarka ah adiga oo aan ku weydiinin inaad wax ka beddesho adeegyada emaylka ama codsiyada. Inta badan xalalka asturnaanta e-mayl ee hadda jira waxay leeyihiin faa'iidooyin iyo faa'iido darro weyn. Waxaad ubaahantahay inaad bedesho adeegyada emaylka ama barnaamijyadooda gebi ahaanba, ama hoos u dhig khibradaada iimaylka adigoo qarinaya dhamaan sawirada. Waxaan aaminsanahay in ka ilaalinta macluumaadkaaga shakhsi ahaaneed in loo gudbiyo dhinacyada saddexaad inay tahay mid fudud oo aan dhib lahayn, sida inta kale ee qaybta ilaalinta asturnaanta ee DuckDuckGo.
Aad waxtar ugu leh bogaggaas oo aan u maleyneyno inay noo soo diri karaan spam ama la wadaagaan cinwaanka emaylkeena. Adoo na siinaya cinwaan emayl gaar ah, waan xallin karnaa waxaas oo dhan. Haa, hadda, Isticmaalayaasha waxay ku biiri karaan oo keliya inay ku biiraan liiska sugitaanka ee gaarka loo leeyahay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Barnaamijyada Mac » Barnaamijyo kale oo loogu talagalay Mac » Haddii aad isticmaasho barnaamijka Apple Mail oo aad rabto inaad ilaaliso, adeegso adeegga cusub ee DuckDuckGo
Xanta ayaa tilmaameysa in iMac-ka cusub ee weyn dib loo dhigay illaa sanadka soo socda